UNGASITHATHA KANJANI ISIPELE SAMAWINDOWS 10 OS KWI-LAPTOP NAKWI-DESKTOP PC - KUXHASWE
Ungasithatha kanjani Isipele samawindows 10 OS kwi-laptop nakwi-Desktop PC
Ngemuva kokuthi uhlelo lwe-Windows 10 lwehluleke ukusebenza kahle, abantu bahlala bezisola ngokuthi abenzi ibhekhaphu eligcwele le Windows 10 OS. Kusho ukuthi amafayela abalulekile ekuhlukanisweni kwesistimu yeWindows nezilungiselelo zangaphambilini awasizi ngalutho. Okubi nakakhulu, udinga ukufaka Windows 10 uhlelo nayo yonke isoftware ehlobene futhi. Ngakho-ke, kungani kungenjalo ukwenza isipele Windows 10 OS ku-HP / Lenovo / ASUS / Acer / Dell yakho ilaptop uma kwenzeka ukulahleka kwedatha?
Okuqukethwe umbukiso 1 Isipele kanjani Windows 10 OS 1.1 Ungayakha Kanjani Windows 10 Isithombe Sesistimu kuLaptop 1.2 Ungasenza kanjani Isipele Windows 10 OS ku-Laptop nge-CloneGo
Isipele kanjani Windows 10 OS
Ungakha isipele esigcwele sakho Windows 10 i-OS isebenzisa ithuluzi lesithombe lesistimu, noma usebenzisa isoftware yenkampani yangaphandle efana ne- CloneGo uhlelo lwamahhala ukukopisha, ukwenza isipele nokubuyisela uhlelo lwe-Windows 10. Nazi izinyathelo ngesinyathelo ngomhlahlandlela wokulondoloza Windows 10 I-OS kukhompuyutha ephathekayo.
Ungayakha Kanjani Windows 10 Isithombe Sesistimu kuLaptop
Windows 10 iza nesici esizenzakalelayo esakhelwe ngaphakathi esizokusiza ukudala isipele sohlelo oluphelele kunoma iyiphi idivayisi yokugcina imidiya yangaphandle njenge-flash drive, i-hard disk yangaphandle, ama-DVD noma iyiphi enye indawo yenethiwekhi. Lesi sithombe sesistimu singasetshenziswa ukubuyisela ikhompyutha yakho uma i-hard drive noma ikhompyutha yakho iyeka ukusebenza. Izinyathelo zilandelayo:
Isinyathelo 1 : Isinyathelo sokuqala sihilela ukuzulazula kwiPhaneli Yokulawula nokukhetha inketho ye-Backup and Buyisela. Lesi sici sisebenza ngokufanayo ku-Windows 10 njengoba sisebenzela iWindows 7.
amawindi ayeke ikhodi dpc_watchdog_violation
Isinyathelo 2 : Uma usukhethe inketho ye-Backup and Buyisela, uzohlangabezana nokwakha inketho yesithombe yohlu efakwe kumenyu yangakwesokunxele. Chofoza kuso ukuze uqhubekele phambili.
Isinyathelo 3 : Isinyathelo esilandelayo ukukhetha indawo lapho ufuna ukugcina khona ifayela lokulondoloza uhlelo. Lapho usukhethe indawo oya kuyo, chofoza Okulandelayo. Sizosikisela ukuthi ulondoloze ifayela lokusekelayo kudivayisi yangaphandle ngoba lokhu kukunikeza ukuphepha okwengeziwe kwedatha uma isistimu yonakala.
ukufinyelela kwephrinta kunqatshelwe amawindi 10
Isinyathelo 4 : Manje isinyathelo esilandelayo ukuhamba ngezilungiselelo zokulondoloza nokuziqinisekisa. Ngemuva kokuhlola izilungiselelo zokulondoloza, konke okumele ukwenze chofoza ku-Start Backup. Uma sekuphelile, iWindows izoqala ngokuzenzekelayo ukudala ifayili lesithombe sohlelo oludingekayo.
Ungasenza kanjani Isipele Windows 10 OS ku-Laptop nge-CloneGo
Kwesinye isikhathi, lesi sici sehluleka ukwenza isipele Windows 10 uhlelo. Ngalesi sikhathi, yini ongayenza ukuvimbela ukulahleka kwedatha? Ungasebenzisa CloneGo ukukhishwa kwamahhala ukukopisha, ukwenza isipele nokubuyisela uhlelo lwe-Windows 10. Ngaphezu kwalokho, ungabuyisa ifayili lesithombe lesistimu eyisipele kunoma iyiphi ikhompyutha ye-Windows bese ulwenza lisebenze.
CloneGo ingenye yamathuluzi esoftware e-Windows OS enika amandla abasebenzisi ukwahlukanisa uhlelo lweWindows njengefayela elicindezelwe. Ngaphezu kwalokho, ungakopisha, wenze isipele futhi ubuyisele ukwahlukaniswa kwesistimu ngaphandle kokungena ku-Windows. Ngaphandle kwalokho, leli thuluzi kulula kakhulu ukulisebenzisa futhi liyahambisana nayo yonke imikhiqizo yekhompyutha, efana ne-HP, Lenovo, Asus, Acer, neDell. Enye into okufanele ishiwo ukuthi isiza abasebenzisi ukwenza hlanganisa idiski ye-boot enamandla ibe eyisisekelo i-hard drive bese uyenza ibhuthile.
Ukuze wenze isipele esigcwele sohlelo lokusebenza lwe-Windows 10, mane ulandele izinyathelo ezibalulwe ngezansi:
Isinyathelo 1: Sebenzisa iSunshare CloneGo - Isipele seWindows OS kukhompyutha yakho ukwenza isipele Windows 10 ukwahlukanisa uhlelo. Emva kwalokho, chofoza 'Isipele' inketho ukudala isipele.
windows 10 ayisabeli ngemuva kokuvuselelwa
Isinyathelo 2: Esinyathelweni esilandelayo, khetha ukwahlukaniswa kwesistimu yeWindows- idrayivu ye-C yokwenza isipele. Lapho usukhethe ivolumu yomthombo, chofoza kunkinobho ethi “Khetha” ukuze usethe indawo okuyiwa kuyo yefayela eliyisipele.
Isinyathelo 3: Manje uzobona Gcina njengewindi futhi ungasetha amafayela ukugcina ifayela lokulondoloza. Ungayigcina kolunye ukwahlukanisa noma kwenye i-hard drive. Futhi, kungenzeka ukuthi ushintshe igama lefayela.
asikwazanga ukudala ukwahlukanisa okusha noma ukuthola okukhona vele ubone amafayela we-log log
Isinyathelo 4: Ngemuva kwalokho, chofoza inkinobho ethi 'Qala' ukuze uqale Windows 10 Inqubo yokwenza isipele ye-OS kukhompyutha yakho ephathekayo.
Amanothi: ifayela eliyisipele lizovela kufolda oya kuyo kungekudala. Ungalayisha ifayela elicindezelwe efwini noma ulithumele kwi-USB flash drive / yangaphandle yedrayivu ukuthola isipele esiphephile. Futhi, uma udinga ukubuyisela ikhompyutha Windows 10 isipele se-OS, udinga nje ukusebenzisa i-CloneGo, chofoza inkinobho ethi 'Buyisela', khetha indawo oya kuyo, engeza ifayela lokulondoloza bese uqhafaza inkinobho ethi 'Qala' ekugcineni. Kufana nenqubo yokwenza isipele.
Ungathanda nokufunda: Ungayilondoloza kanjani ngokuzenzakalela ifolda kumawindi 10, 8.1 no-7
umsindo awusebenzi ku-google chrome
Manje usuyazi izindlela ezimbili zokulondoloza Windows 10 ukwahlukanisa uhlelo. Kungani ungaqhubeki ukuthatha isipele esigcwele sohlelo manje? Akunandaba ukuthi usebenzisa Windows 10 ukwenza isipele nokubuyisela isici noma isoftware yeCloneGo ngeke kwephuze ukwenza isipele esigcwele sohlelo lwakho lweLaptop yeWindows.
Ungasithatha Kanjani Isipele Futhi Ubuyisele Registry yeWindows
Umhlahlandlela we-A kuya ku-Z Kumashayeli Wedivayisi ku-Windows 10, 8.1 no-7
Ungayisetha kanjani kabusha izilungiselelo zenethiwekhi (ukusetha okuzenzakalelayo) ngaphakathi Windows 10 1903
Gcina Ibhizinisi Lakho Liphephile Ngalezi Zeluleko Ezingu-10 Zokuphepha kwe-Cyber
Izinhlelo Zokusebenza Ezilahlekile ngemuva Windows 10 Okthoba 2020 Vuselela inguqulo 20H2
Izinhlelo Zokusebenza ze-Microsoft Store ezilahlekile kwimenyu yokuqala noma izinhlelo zokusebenza ezingekho azisaphinwa emafasiteleni 10 Qala Imenyu Lapha ukuthi ungazifaka kanjani kabusha izinhlelo zokusebenza ze-windows 10
Ungayilungiselela kanjani ukubethela kwedrayivu yeBitLocker Windows 10
Isici sokuvikelwa kwesistimu yokubethela kweBitLocker Drive esivikela idatha ngokunikela ngemfihlo yevolumu yonke etholakala kuma-Pro Editions we Windows 10
Izici ezi-5 ezihamba phambili ngokuvuselelwa kuka-Okthoba 2018, Windows 10 Inguqulo 1809!
Misa windows 10 ukuthuthukiswa okuphoqelelwe ukufaka inguqulo yokuvuselela 1709
Bheka ukuthi iyiphi i-Windows 10 oyifakile kwikhompyutha yakho / kwi-laptop
Ungayibuyekeza Kanjani Faka Umshayeli Wokubonisa On Windows 10, 8.1 no-7
Lungisa isitolo esingalindelekile ngaphandle kwephutha le-Blue screen windows 10
Windows 10 Qala kabusha imenyu ihlolwe kusiteshi se-Dev build 20161
Ungawathola Kanjani Amafayela Asuswe Ngunaphakade ku Windows 10
Indlela yokulungisa amafayela wesistimu okonakele ku-Windows 10, 8.1 no-7
Ungasilungisa kanjani isikrini seLaptop Touch esingasebenzi kumawindi 10
Ungayiguqula kanjani i-WPS ibe yi-DOC, i-DOCX noma i-PDF nge-inthanethiconvertfree
windows 10 ulokhu uzama ukuvuselela
ikhodi yokuma: umshayeli irql hhayi omncane noma olinganayo
ukuxhumeka kwendawo kwamawindi ayi-7 akunakho ukucushwa kwe-ip okuvumelekile
isici sokuvuselelwa windows 10 inguqulo 1803 inamathele
i-mic ayisebenzi windows 10
amawindi awabuyekezeli ku-1903
windows 10 ilahlekelwa ukuxhumeka kwe-inthanethi